Chọpụta ihe ị ga-ahụ na Peratallada | Akụkọ Njem
Peratallada bụ obere obodo eji eme ochie dị n'ógbè Girona. Obodo a bụ nke obodo Forallac na Bajo Ampurdán. E kwuputara na ọ bụ Ebe Ọdịnala Ihe Mere Eme, nke abụghị ihe ijuanya, n'ihi na ọ bụ otu n'ime obodo kachasị mma echekwara n'oge niile na Catalonia.
Taa, anyị ga-ahụ otu a gaa na obodo Peratallada na Catalonia. Ọ bụ obere obodo na-anabata ndị mmadụ, nke na-anaghị ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị, n'ihi na mmadụ nwere echiche na mmadụ agaghachila n'oge. N'ime mkpokọta a, enwere ụfọdụ ihe ncheta akụkọ ihe mere eme bụ ndị kwesịrị iji nlezianya hụ.
1 Gaa Peratallada
3 Okporo ámá nke obodo ahụ
4 Chọọchị nke Sant Esteve
5 Obí-Obí nke Peratallada
6 Lọ Elu Awa na Okirikiri Towerlọ Elu
Obodo a dị na mpaghara Costa Brava, n'ime obodo. Site na Vulpellac GI-644 ruru ya ma ọ bụrụ na anyị si Girona. Ọ bụrụ na anyị si mpaghara dị n'ụsọ oké osimiri, dị ka Palamós, mgbe ahụ anyị ga-atụgharị na Sant Climent de Peralta. Havekwesịrị ịmụrụ anya, n'ihi na ọ dị mfe ịhapụ obodo, ebe ọ dị obere. Nhọrọ kachasị mma bụ iji GPS. Mgbe ha ruru obodo ahụ ogige ntụrụndụ atọ dị nso. Ekwesiri ighota na n'oge oge di elu na na ngwụsị izu a na-akwụ ugwo ugbo ala ndi a, nke n’egosi na o bu obodo ndi njem nleta n’oge ahu.
Obodo a nwere aha na pụtara 'nkume a wapụtara', na ọ bụ na dị ka ị pụrụ ịhụ na gburugburu ebe obibi, nkume bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi e ji wusie ike ma bulie obodo ahụ. O nweghị mmadụ 100 bi na ya, yabụ anyị nwere ike iche na ọ bụ ebe dị jụụ n'afọ niile. Eziokwu bụ na n'ime izu na n'oge dị ala ọ bụ ebe dị mma, ebe ọ bụ na mmadụ ole na ole na-eleta ya, mana na ngwụsị izu na n'oge ọkọchị, ndị ọbịa na-arịwanye elu, nke na-ewepụkwa amara ụfọdụ na gburugburu ebe a. . Ọ bụ ya mere a ga-eji atụ aro ileta ya mgbe anyị hụrụ mmadụ ole na ole. Ihe dị ịtụnanya bụ na n'obodo a, amachibidoro iwu ihe owuwu ọhụụ ọbụna tupu ekwupụta ya Ebe Ọdịnala Ihe Mere Eme, nke gosipụtara oke mkpa ọdịnala na akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ nwere maka ndị ya.
Okporo ámá nke obodo ahụ
Otu n'ime ihe ị ga-ahụ n'obodo a bụ doro anya n'okporo ámá ya. Wara warara n'okporo ámá nke ochie, cobbled na mara mma. Ha na-eme ka anyị chee na oge ọzọ ma anyị nwere ike iche akụkọ banyere ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị. Anyị nwere ike ịgafe n'okpuru arches, hụ ọmarịcha ihe ndị e wuru ma nwee mmasị n'otú osisi vaịn ahụ si arịgo ọtụtụ mgbidi, na-enye ikuku akụkọ ifo na-emeri onye ọ bụla na-eleta Peratallada.
Chọọchị nke Sant Esteve
Chọọchị ochie Romanesque nke Sant Esteve dị na mpụga mgbidi obodo. N'ebe ọwụwa anyanwụ temple malitere site na narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ na ngwụcha ọmarịcha ijegharị nke nwere osisi ga-ebupute ya were foto mara mma nke gburugburu ebe obibi. Ihe na-apụta ìhè bụ nnukwu facade ya na arches a kapịrị ọnụ, obere windo rose na ọnụ ụzọ nwere njigide semicircular. Ọ bụ facade dị mfe, yana akara kwụ ọtọ ma maa mma. Akọwa ụzọ ya dị ka mbubreyo Romanesque Empordà. Ihe ojoo banyere uka a bu na i gaghi enwe ike ileta n’ime ya belụsọ ma anyi gaa n’ụlọ ọrụ ndi njem nleta maka njem njegharị. N'ime enweghi otutu ihe icho anya, ebe obu na emechaghi ya na agha ndi agha wepuru ihe icho mma, ma enwere akwukwo baptism ochie na udi Gothic nke Baron Gilabert de Crüilles.
Obí-Obí nke Peratallada
Akwụkwọ ndị mbụ na-ekwu maka ụlọ a sitere na 1065, ma o doro anya na owuwu a sitere na mmalite nke owuwu ndị dị ọbụna tupu mgbe ahụ, na-eru oge ndị Rom. Na nnukwu ụlọ ị pụrụ ịhụ ọcha nke Romanesque, Gothic na ụdị ndị ọzọ. A na-enweta ya site na Plaça del Castell, nke ga-abụrịrị na ebe a na-eme ochie. A gbanwere ya gaa na họtel mara mma ma ugbu a enweghị ike ileta ya, ọ bụ ezie na enyere ohere nleta mbụ.
Lọ Elu Awa na Okirikiri Towerlọ Elu
El a gbara mgbidi na mgbidi na narị afọ nke iri na abụọ. Ka ọ dị ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla fọdụrụ na ya, mana ụfọdụ ụlọ elu ya ka echekwara. Otu n'ime ha bụ Torre de las Horas, nke bụ elekere ihu ọha nke obodo ahụ, nke pụtara maka inwe arches na elu ya. Towerlọ okirikiri ahụ nwere ọdịdị ahụ nke ọma ma nwee oghere maka ngwa agha.
Nke a doro anya na kasị foto ebe n'ime obodo, ya mere, ọ bara uru ịkwụsị. O nwere okwute mara mma nke mara mma, mgbidi ya na ahihia ya na ndagwurugwu ya na ya. Ebe zuru oke iji see foto ikpeazụ na obodo Peratallada.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Girona » Peratallada, ihe ị ga-ahụ
Akwa mmiri London